Michael Keating oo sheegay in siyaasiyiinta madasha ay dib u dhigayaan doorashada dalka – Bulshoweyn.com | Your Source Of News And Entertainment
Michael Keating oo sheegay in siyaasiyiinta madasha ay dib u dhigayaan doorashada dalka
Ergeyga gaarka ah ee Qaramada Midoobay u qaabilsan arrimaha Soomaaliya Michael Keating oo bartiisa Twitterka soo dhigay qoraalo ayaa siyaasiyiinta madaxda ee madasha Qaran ku eedeeyay inay doorashada dib u dhigayaan.
Michael Keating ayaa qoraalada uu bartiisa twitter-ka soo dhigay ka mid ahaa in howlaha doorashada ay gaba-gabo yihiin lana diyaariyay shahaadooyinkii xildhibaanada ay qaadan lahaayeen, si ay kulamadooda uga bilaabaan magaalada Muqdisho ee caasimadda dalka Soomaaliya.
Sidoo kale, Michael Keating ayaa bartiisa Twitter-ka soo dhigay sawir uu la galay xoghayaha guud ee baarlamaanka federaalka Soomaaliya C/kariin Buux iyo guddoomiyaha guddiga doorashada Xaliimo Yareey, wuxuuna eedeyn dusha kala dhacay siyaasiyiinta Soomaaliyeed.
“Waxaa haatan diyaar loo yahay oo la sugayaa in la diiwaan geliyo oo shahaado la siiyo xildhibaanada, balse waxaa arrintaasi kasoo horjeeda siyaasiyiinta madaxda madasha oo doorashooyinka dalka ka dhici lahaa dib u dhigaya” Sidaas waxaa yiri Michael Keating oo ah Ergayga gaarka ah ee QM u qaabilsan arrimaha Soomaaliya.
Si kastaba, Qaramada Midoobay ayaa inta badan dadaal ugu jirta in sida ugu dhaqsiyaha badan loo de-dejiyo doorashada dalka, waxayna mas’uuliyiinta qaarkooda hore usoo jeediyeen in hadii xildhibaanada la doortay islamarkaana gaaraan Kooram in shirarkoodu bilawdaan, si howlaha ay usii socdaan.